Zụta Ubu Ubu Nwanyi Na Nwa Nwanyị Na-adaba - Mbupu n'efu & Enweghị |tụ | WoopShop®
Gbanyụọ Ubu Ebube Nne na Nwa Nwanyị Jumpsuit
$ 13.99 Ịgachi price $ 14.99
Gbanyụọ Ubu Nwanyi Na Nwaanyị Jumpsuit - 7T na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Ụkpụrụ Type: nkeewa akara
Ngwakọta gụnyere: 1x Romper
Chart Size Girl:
size Ogologo Romper na na ukwu Hip Na-atụ aro Age
Chaatị nke Womenmụ nwanyị:
size Ogologo Romper na na ukwu Hip aka uwe
Mara: E nwere ọdịiche nke 2-3% dabere na ntuziaka ntuziaka. Biko lelee eserese nke ọma tupu ịzụta ihe ahụ. Biko mara na obere ụcha dị iche kwesịrị ịnabata n'ihi ọkụ na ihuenyo. 1 anụ ọhịa = 2.54 cm
Na-adaba ịtụnanya .. nwa nwanyị m na-ejima ... hụrụ ya n'anya
Nweta uwe ndị a maka obere ndị na-egbu m shuga na onye ọ bụla kwuru na ha mara mma
La taille wunye nwanyi ana akari. Ọ bụ site n'ụlọ mkpọrọ ka ị ga-esi gbaa ndị mmadụ ume ka ị rụọ ọrụ
Super mara mma! Ezigbo mma, dị ka foto a. Nnọọ. Mbupu ngwa ngwa
Naanị zuru oke !!! Anya dị ịtụnanya